धूलोधुवाँले ग्रस्त सुर्खेतलाई बनाउन सकिन्छ... :: माधव चौलागाईं :: Setopati
धूलोधुवाँले ग्रस्त सुर्खेतलाई बनाउन सकिन्छ 'साइकल सहर'
केही दिनअघि सुर्खेत बजारबाट एअरपोर्ट जाँदै थिएँ। मूलसडक अर्थात् रत्न राजमार्ग स्तरोन्नति भइरहेकाले धूलो र खाल्डो छल्न बसपार्क उत्तरतर्फको भित्री बाटो हिडेँ। केहीअघि खजुरा नपुग्दै जाममा परेँ।
बाटोभरि मोटरसाइकल र स्कुटरहरू असरल्ल पार्क गरेर जाम परेको थियो। त्यो क्याम्पसको बाटो थियो र ती सवारी विद्यार्थी र प्राध्यापकका थिए।
केही वर्षअघिसम्म यहाँ साइकल चढ्ने विद्यार्थीको बाहुल्य हुन्थ्यो। कतिपय प्राध्यापक साइकलमै यात्रारत भेटिन्थे। बाहिरबाट आउने विद्यार्थीको पहिलो नयाँ सीप सिकाइ अभ्यास साइकलबाटै हुन्थ्यो। स्थानीयको दैनिकीको अभिन्न साधन साइकल नै हुन्थ्यो। प्रायः सबैका घरमा साइकल हुन्थे।
अचेल दृश्य फरक छ। साइकल गरिबको साधनझैं बनेको छ। अलिकति आर्थिक हैसियत बनाएकाहरूलाई साइकल चढेर शिक्षालय, कार्यालय वा बजार जानु सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्नु हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले हरेक परिवारमा सकी-नसकी मोटरजन्य सवारी किन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेझैं लाग्छ। बिल्कुलै गलत प्रतिस्पर्धा।
यसका कारण छन्।
सुर्खेत छोटो अवधिमा तीव्र र अव्यवस्थित सहरीकरण उन्मुख छ। पञ्चायती व्यवस्थामै थालनी भएको योजनाबद्ध नगर विकासले गति लिन सकेन।
अन्यत्रझैं यहाँ पनि घरजग्गा कारोबार र स-साना व्यवसायबाट मानिसको आर्थिक रुपान्तरण सुरूआत भयो। मानिसमा सवारीसाधन छनौटका आकांक्षा बढ्न थाले। समाजमा आफ्नो हैसियत देखाउन पनि साइकल त्याग्ने र मोटरजन्य सवारी खरिद गर्ने चलन बढ्यो।
अनियन्त्रित बस्ती निर्माण हुन थाले। विशेषगरी राजमार्ग दक्षिणका मलिला फाँट मासिँदै घर बन्न थाले। यो क्रम प्रदेश राजधानी भएपछि झनै तीव्र छ। बस्ती जोड्ने बाटा बने। तर ती मानिस हिँड्न वा साइकल चलाउन नभई मोटर कुदाउने प्रयोजनका लागि मात्र बने। मोटर कुद्ने बाटामा साइकल वा पैदलयात्री प्राथमिकतामा परेनन्।
मोटरजन्य सवारीको हर्न र गतिबाट उनीहरू तर्साइन्छन्, हप्काइन्छन् र हतोत्साही बनाइन्छन्। परिणमतः धेरैले साइकललाई दैनिक सवारीको माध्यम बनाउने हिम्मत जुटाउन सक्दैनन्। र साइकल त्याग्छन्।
सन्तुलित विकासको दीर्घकालीन सोच अभावमा सुर्खेत विकासका लागि गरिएका सबै पूर्वाधार निर्माण साइकलमैत्री भएनन्। मानवीय र पर्यावरणीय सामञ्जस्य कायम राख्नै स्वच्छ र सन्तुलित नगर बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै सुर्खेत अन्य थुप्रै सहरउन्मुख नगरझैं कुरुप बन्ने होडमा छ।
ढिला भइहालेको भने छैन। सुर्खेत साइकलमैत्री नगर बनाउँदा यहाँका नागरिक र सरकारलाई बहुआयामिक रूपमा प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ।
अचेल साइकलमा आफ्नो दैनिकी चलाउनेहरू प्रायः न्यून आय भएका गरिब छन्। उनीहरू पनि अन्य नागरिक सरह अधिकार प्राप्त मतदाता हुन्। उनीहरूको दैनिक जीवन सहज पार्नु सरकारको कर्तव्य हो। साइकलमैत्री सडकले ती नागरिकलाई सम्मानपूर्वक आवतजावत र सहज दैनिकीको प्रत्याभूति गराउँछ।
अलि समय पहिले सुर्खेतका केही कृषकलाई साइकल बाँडिएको थियो। यो सराहनीय प्रयास हो, तर उनीहरूलाई साइकल चलाउन सहज बनाउने उपाय पनि सँगै ल्याइनुपर्छ। साइकल भएर पनि चलाउन हिच्किचाउनेहरूका साइकल पनि उपयोगमा आउँछ। विस्तारै अरुको पनि साइकलमा रुचि पलाउँछ वा फर्किन्छ।
यसले सार्वजनिक वा निजी सवारीमा लाग्ने यातायात खर्च बच्छ। यस्तो बचतको परिमाण वास्तवमा उल्लेखनीय हुन्छ।
उदाहरण- मानौं सुर्खेतको लाटीकोइलीबाट दैनिक सुर्खेतबजार आउजाउ गरिरहने व्यक्तिले अटोरिक्सामा यात्रा गर्नुपर्दा दिनको कम्तीमा १५० रुपैयाँ खर्च गर्छ। हरेक एउटा चोकबाट अर्कोमा पुग्न २० देखि ३० रुपैयाँ लाग्छ। यस हिसाबले विदा कटाएर महिनामा २० दिन मात्र यात्रा गर्दा कम्तीमा २५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। साइकलले विद्यार्थी, कर्मचारी, स-साना व्यापारी र किनमेल, भेटघाटका लागि ओहरदोहर गरिरहने सबैको दैनिक खर्च कटौती हुन्छ।
मोटरजन्य सवारीधनीहरू पनि क्रमशः साइकल चलाउन उत्प्रेरित हुनेछन्। फजुल खर्च कटौती हुन्छ। नगरमा सवारी चाप कम हुन्छ। पार्किङ सहज हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ कम खपत हुन्छ। प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ।
नियमित साइकल चलाउँदा मानिसको स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। कतिपय नसर्ने रोगहरूको प्रकोप कम हुन्छ। उपचारमा हुने सम्भावित खर्च रोकिन्छ।
पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले सुर्खेतमा साइकल अत्यन्त सान्दर्भिकता भएको ठाउँ हो। यहाँका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, डाँडापाखा, जंगल, खेतबारी र बस्तीहरू साइकलबाट भ्रमण गर्न उपयुक्त छन्।
जस्तै, सुर्खेतको घण्टाघरबाट मंगलगढी हुँदै दक्षिणतिर काँक्रेबिहार पुगेर पछााडिका फाँट हुँदै पूर्व मोडिएर देउतीबज्यै मन्दिर दर्शन गरी बुलबुले तालको बाटो फर्किन सकिने ट्रेल। यसमा साइकल यात्रा कति रोमान्चक हुन्छ होला?
स्थानीयको आर्थिक उन्नतीमा पनि सहयोग पुर्याउँछ।
यसबाहेक साहसिक खेलका रुपमा पनि साइकल प्रवर्द्धन सम्भावना छ। यहाँ विभिन्न विशेषतासहितका साइकल ट्रेल विकास गर्न सकिन्छ। डाउनहिल, क्रसकन्ट्री खेल खेल्न मिल्ने रुट पहिचान गर्न सकिन्छ।
जस्तै बांगेसिमलको बाटो उक्लेर माथि गोठीकाँडा, अनि छेडाको बाटो कट्कुवाबाट झरेर कपासे, इत्राम वा नेवारे। पूरै जंगल सफारी झैं अनुभव। वा सुर्खेत उपत्यकको कोरा (एक फन्को)। नयाँ प्रकारका माउन्टेनबाइकको प्रयोग हुन्छ।
यी गतिविधि बढेसँगै रारा हिँडेका पर्यटकले सुर्खेतमा अल्झिने बहाना पाउँछन्। उनीहरूको बसाइ लम्बिन्छ। पर्यटकको बसाइ जति लामो भयो त्यति आर्थिक लाभ हुन्छ। स्थानीय रोजगारको ढोका खोल्छ। साइकल बिक्री, मर्मत गर्ने र भाडामा लगाउने पसल खुल्छन्। हरेक पर्यटकीय स्थलमा व्यवसायिक गतिविधि बढ्छन्।
पर्यावरणीय सन्तुलनको सचेतनामा अभिवृद्धि हुन्छ।
साइकल एक, लाभ अनेक छ। त्यसैले सुर्खेतमा साइकल संस्कृति बढाउनु जरुरी छ। यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ।
हाल सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्तरोन्नती गरिहेका भित्री सडकमा दुवैतर्फ फुटपाथ र साइकल लेन बनाउन सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा बाटो खन्ने र चौडा पार्ने क्रम चलिरहेकोले यति काम बेलैमा गर्न सकिन्छ।
रत्नराजमार्गको सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्मको खण्डले सम्पूर्ण सुर्खेत उपत्यकालाई बीचबाट काटेर गएको छ। यो खण्डको स्तरोन्नती धमाधम चलिरहेको छ। संघीय सरकारको योजना भए पनि तत्काल नगरपालिकाले पहलकदमी सुरु गरी दुवैतिर साइकल लेन व्यवस्था गर्न सके दूरगामी महत्व राख्नेछ।
यसैगरी उपत्यका वरिपरिका डाँडा र फेदीहरूमा अवस्थित गाउँबस्ती जोड्ने गोरेटाहरू समेटेर साइकल रुट बनाउन सकिन्छ। रिङरोड भनेजस्तै यो एउटा रिङरुट बन्नेछ। यो सुर्खेत कोरा साइक्लिङ गर्न उपयुक्त रुट हुन्छ।
सुर्खेतका कार्यालय, प्रमुख व्यापारिक भवन, अस्पताल लगायतमा साइकल पार्किङ सुविधा तयार पार्ने र सूचना जारी गर्न सकिन्छ। कर्मचारी र प्रतिनिधिलाई कामकाजमा साइकल चलाउन प्रोत्साहित गर्ने। साइकल सम्बन्धी नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने। युवाहरू परिचालन गरी साइकल प्रवर्द्धन गर्न रोल मोडल बनाउने। राइडहरू आयोजना गर्ने। सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोगरी आकर्षण थप्ने। निजी क्षेत्र जस्तै होटल, बैंक, स्कुल लगायतलाई यस्ता गतिविधि सञ्चालन र सहयोग गर्न आह्वान गर्ने। यति गरे साइकल संस्कार विस्तारै हुर्किँदै जानेमा शंका छैन।
गत वर्ष पञ्चपुरी नगरपालिकाले इलाका प्रहरी चौकी बावियाचौरलाई पाँचवटा साइकल दिएर 'साइकल गस्ती' सुरूआत गरेको थियो। त्यस्तै सिम्ता गाउँपालिकाले भारतको ताजमहल, नेपालको लुम्बिनी हुँदे सुर्खेतसम्म साइकल यात्रा गरी पर्यटकीयस्थल चिनाउन प्रयास गर्ने बालकृष्ण शाहीलाई सम्मान गरेको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चर्चित कलाकार प्रेमदेव गिरीलाई साइकल प्रयोग गरेकामा सम्मान गरेको थियो।
यी प्रयासले अरूलाई उत्प्रेणा दिन्छन् र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छन्। यस्ता सराहनीय प्रयास अन्त पनि लागू गर्न सकिन्छ।
दीर्घकालीन रणनीतिका रुपमा नीतिगत आधार तयार गर्न सकिन्छ।
जस्तै, हरेक संरचना निर्माण साइकलमैत्री हुनपर्ने मापदण्ड तयार गर्ने। नगरभित्र बन्ने हरेक सडकमा साइकल लेन अनिवार्य गर्ने। साइकल सम्बन्धी व्यवसायलाई करमा सहुलियत व्यवस्था गर्ने। नगरको शान स्वरुप बर्सेनी बृहत साइक्लिङ गतिविधि आयोजना गर्ने। यसका लागि नगरस्तरीय कमिटी स्थापना गर्ने।
यति गर्नसके सुर्खेत एक आधुनिक पर्यावरणमैत्री सुन्दर नगरका रुपमा परिचित हुनेछ। युरोपतिरका कतिपय आधुनिक सहरले अचेल गल्ती सच्च्याउँदै छन्। मोटरबाटोले निलेका बाटा पैदल र साइकलयात्रीलाई फर्काउँदै छन्। हामी उनीहरूको भोगाइ र सिकाइबाट फाइदा लिन सक्छौं। अहिल्यैदेखि सडक जोगाएर राख्न सक्छौं।
यही जेठ २० गते सोमबार (जुन ३ तारिख) राष्ट्र्संघले गत वर्ष मात्र घोषणा गरेको दोस्रो विश्व साइकल दिवस पर्छ। यो अवसर मध्यनजर गरी सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाले सुर्खेतलाई 'साइकल सहर' बनाई दीर्घकालीन रुपमा बसोबासका लागि उत्कृष्ट ठाउँ बनाउनेतर्फ सार्थक प्रयास सुरूआत गर्न सक्छन्।
(लेखक चौलागाईं तातोपानी गाउँपालिका-५, कर्णाली प्रदेशका बासिन्दा हुन्।)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३, २०७६, ०५:००:००
नेपालमा उपचार पद्धति र औषधिको गुणस्तर
कहिलेसम्म अपांगको जीवनसाथी अपांग नै ?
भावी पिँढीलाई जागिर खाने बनाउने कि जागिर खुवाउने?
मैले देखेका महिला र पुरुष सांसद